မိနျးမဆိုတာ ပါရမီဖွညျ့ဖကျ သကျသကျပဲလား? - For her Myanmar
မိနျးမဆိုတာ ပါရမီဖွညျ့ဖကျ သကျသကျပဲလား?
ကွားလိုကျရငျတော့ ကွညျနူးစရာ စကားပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ ပါရမီဖွညျ့ဖကျဆိုတဲ့ စကားလုံးနောကျကှယျမှာ ဘယျလိုဝနျတှေ ပိနကွေပွီလဲ?
“ပါရမီဖွညျ့ဖကျ”တဲ့ ကြှနျမတို့ကို ဒီလိုသတျမှတျကွတယျ။ ကြှနျမတို့ဟာ အားနှဲ့ကွတယျ။ ကြှနျမတို့ဟာ ကိုယျ့ခွထေောကျပျေါ ကိုယျမရပျတညျနိုငျကွဘူး စတဲ့ နှိမျ့ခမြှုတှအေောကျမှာ ကြှနျမတို့ကို နှိမျ့ခနြကွေတယျ။ ကြှနျမ ဘှဲ့ရတော့ မိဘတှကေ မာစတာ ဆကျတကျခိုငျးပွီး ကြောငျးဆရာမလုပျခိုငျးတယျ။
သူတို့ရဲ့ အကွောငျးပွခကျြက တဈခုတညျး “မိနျးကလေးဆိုတာ ပိုကျဆံရှာဖို့ မလိုဘူး။ အခြိနျတနျ ယောကျြားယူရမှာ။ အဲ့တော့ အိန်ဒွရေရ ကြောငျးဆရာမလေးပဲ လုပျ၊ အိမျထောငျပွုတဲ့အခါ ယောက်ခမ အငွိုငွငျမခံရအောငျ အိမျမှုကိစ်စသငျပါ စတဲ့စတဲ့ စကားလုံးတှရေဲ့ အဆုံးမှာ မိနျးကလေးဆိုတဲ့ အကွောငျးပွခကျြကွီးတဈခုသာ…
ဒါဆို ကြှနျမတို့ရဲ့ မှေးဖှားခွငျးက တဈခွားတဈယောကျအတှကျ အဖွညျ့ခံ သကျသကျပဲလား။ လငျကောငျးသားကောငျး ရဖို့အတှကျ ကြှနျမတို့ရဲ့ အိမျမကျ မြှျောလငျ့ခကျြတှေ စှနျ့လှတျလိုကျရတော့မှာလား။ အိမျမှုကိစ်စဆိုတာ ကြှနျမတို့အတှကျ အငျမတနျမှ အရေးပါတဲ့၊ မဖွဈမနေ ထမျးဆောငျရမယျ့ တာဝနျတဈခုလား။ ပွီးတော့ ပွောကွသေးတယျ။ “သမီးကညာ အခါမလငျ့စနေဲ့တဲ့” ဒါဆို ကြှနျမတို့က မဖွဈမနေ အိမျထောငျပွုရမှာတဲ့လား။ ကြှနျမတို့ တဈယောကျတညျးကော ရပျတညျလို့ မရနိုငျဘူးလား။ မဖွဈမနေ အားကိုးရှာရမှာတဲ့လား။
Related article >>> မိနျးကလေးတိုငျးကွောကျရှံ့ခွငျးမှကငျးဝေးစဖေို့..
အိမျထောငျနဲ့အဆငျမပွလေို့ ကှဲသှားခဲ့ရငျတောငျ ပွောကွသေးတယျ။ “လငျမရှိတဲ့မိနျးမ မတငျ့တယျ” တဲ့။ ဒါဆို ကြှနျမတို့က ကိုယျနဲ့ အဆငျပွသေညျဖွဈစေ မပွသေညျဖွဈစေ ပတျဝနျးကငျြမှာ တငျ့တယျနဖေို့အတှကျ ယောကျြားတဈယောကျ အမွဲရှိနရေမယျ့ သဘောလား။ အိုး တျောကွပါတော့။ ကြှနျမတို့ရဲ့ ဖွဈတညျမှုကို အဲ့လောကျထိ မနှိမျ့ခကြွပါနဲ့တော့။ ကြှနျမတို့မှာလညျး ကိုယျပိုငျစှမျးအား ရှိပါတယျ။
ဖွဈတညျလာမှုအရ ကြှနျမတို့မှာ တောငျ့တငျးတဲ့ ကွှကျသားတှမေရှိပမေဲ့ (ဒါတောငျ လုပျယူလကေ့ငျြ့လို့ ရပါသေးတယျ) ဉာဏစှမျးအား၊ လုံ့လစှမျးအားတှတေော့ ရှိနပေါသေးတယျ။ ကြှနျမတို့မှာလညျး စိတျကူးအိပျမကျတှရှေိတယျ။ ကြှနျမတို့ စှမျးဆောငျနိုငျတာတှေ အမြားကွီးရှိတယျ။
“မိနျးမသားဆိုတာ ပါရမီဖွညျ့ဖကျ”ဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျအောကျမှာ ကြှနျမတို့ကို မခြုပျထားကွပါနဲ့။ လှတျလပျခှငျ့ပေးကွပါ။ အိပျမကျတှေ အကောငျအထညျ ဖျောခှငျ့ပွုပါ။ ကြှနျမတို့မှေးဖှားလာခွငျးဟာ တဈပါးသူကို ဖွညျ့ဆညျးပေးဖို့ သကျသကျ မဟုတျပါဘူး။ အမြိုးသမီးလေးတှကေိုလညျး မှာခငျြတာက ဒီလိုသတျမှတျခကျြတှအေောကျကနေ ရုနျးထှကျကွပါ။ ကြှနျမတို့ လုပျနိုငျတာတှေ အမြားကွီးရှိတယျဆိုတာ အတူတကှ သကျသပွေပေးကွရအောငျလား…
ကြားလိုက်ရင်တော့ ကြည်နူးစရာ စကားပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ပါရမီဖြည့်ဖက်ဆိုတဲ့ စကားလုံးနောက်ကွယ်မှာ ဘယ်လိုဝန်တွေ ပိနေကြပြီလဲ?
“ပါရမီဖြည့်ဖက်”တဲ့ ကျွန်မတို့ကို ဒီလိုသတ်မှတ်ကြတယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ အားနွဲ့ကြတယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်မရပ်တည်နိုင်ကြဘူး စတဲ့ နှိမ့်ချမှုတွေအောက်မှာ ကျွန်မတို့ကို နှိမ့်ချနေကြတယ်။ ကျွန်မ ဘွဲ့ရတော့ မိဘတွေက မာစတာ ဆက်တက်ခိုင်းပြီး ကျောင်းဆရာမလုပ်ခိုင်းတယ်။
သူတို့ရဲ့ အကြောင်းပြချက်က တစ်ခုတည်း “မိန်းကလေးဆိုတာ ပိုက်ဆံရှာဖို့ မလိုဘူး။ အချိန်တန် ယောကျာ်းယူရမှာ။ အဲ့တော့ အိနြေ္ဒရရ ကျောင်းဆရာမလေးပဲ လုပ်၊ အိမ်ထောင်ပြုတဲ့အခါ ယောက္ခမ အငြိုငြင်မခံရအောင် အိမ်မှုကိစ္စသင်ပါ စတဲ့စတဲ့ စကားလုံးတွေရဲ့ အဆုံးမှာ မိန်းကလေးဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်ကြီးတစ်ခုသာ…
ဒါဆို ကျွန်မတို့ရဲ့ မွေးဖွားခြင်းက တစ်ခြားတစ်ယောက်အတွက် အဖြည့်ခံ သက်သက်ပဲလား။ လင်ကောင်းသားကောင်း ရဖို့အတွက် ကျွန်မတို့ရဲ့ အိမ်မက် မျှော်လင့်ချက်တွေ စွန့်လွှတ်လိုက်ရတော့မှာလား။ အိမ်မှုကိစ္စဆိုတာ ကျွန်မတို့အတွက် အင်မတန်မှ အရေးပါတဲ့၊ မဖြစ်မနေ ထမ်းဆောင်ရမယ့် တာဝန်တစ်ခုလား။ ပြီးတော့ ပြောကြသေးတယ်။ “သမီးကညာ အခါမလင့်စေနဲ့တဲ့” ဒါဆို ကျွန်မတို့က မဖြစ်မနေ အိမ်ထောင်ပြုရမှာတဲ့လား။ ကျွန်မတို့ တစ်ယောက်တည်းကော ရပ်တည်လို့ မရနိုင်ဘူးလား။ မဖြစ်မနေ အားကိုးရှာရမှာတဲ့လား။
Related article >>> မိန်းကလေးတိုင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမှကင်းဝေးစေဖို့..
အိမ်ထောင်နဲ့အဆင်မပြေလို့ ကွဲသွားခဲ့ရင်တောင် ပြောကြသေးတယ်။ “လင်မရှိတဲ့မိန်းမ မတင့်တယ်” တဲ့။ ဒါဆို ကျွန်မတို့က ကိုယ်နဲ့ အဆင်ပြေသည်ဖြစ်စေ မပြေသည်ဖြစ်စေ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တင့်တယ်နေဖို့အတွက် ယောကျာ်းတစ်ယောက် အမြဲရှိနေရမယ့် သဘောလား။ အိုး တော်ကြပါတော့။ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို အဲ့လောက်ထိ မနှိမ့်ချကြပါနဲ့တော့။ ကျွန်မတို့မှာလည်း ကိုယ်ပိုင်စွမ်းအား ရှိပါတယ်။
ဖြစ်တည်လာမှုအရ ကျွန်မတို့မှာ တောင့်တင်းတဲ့ ကြွက်သားတွေမရှိပေမဲ့ (ဒါတောင် လုပ်ယူလေ့ကျင့်လို့ ရပါသေးတယ်) ဉာဏစွမ်းအား၊ လုံ့လစွမ်းအားတွေတော့ ရှိနေပါသေးတယ်။ ကျွန်မတို့မှာလည်း စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေရှိတယ်။ ကျွန်မတို့ စွမ်းဆောင်နိုင်တာတွေ အများကြီးရှိတယ်။
“မိန်းမသားဆိုတာ ပါရမီဖြည့်ဖက်”ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ကျွန်မတို့ကို မချုပ်ထားကြပါနဲ့။ လွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြပါ။ အိပ်မက်တွေ အကောင်အထည် ဖော်ခွင့်ပြုပါ။ ကျွန်မတို့မွေးဖွားလာခြင်းဟာ တစ်ပါးသူကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ သက်သက် မဟုတ်ပါဘူး။ အမျိုးသမီးလေးတွေကိုလည်း မှာချင်တာက ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်တွေအောက်ကနေ ရုန်းထွက်ကြပါ။ ကျွန်မတို့ လုပ်နိုင်တာတွေ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာ အတူတကွ သက်သေပြပေးကြရအောင်လား…
Tags: Letters from Heart, Motivation, women empowerment
Myat Moe October 3, 2018